Home Wararka Ma runbaa in Mareykanka uu Xasan Kheyre u diiday VISAHA dal ku...
Ma runbaa in Mareykanka uu Xasan Kheyre u diiday VISAHA dal ku galka?
Iyada oo dowlada Mareykanka ay dhawaan ku dhawaaqday in qaar kamida siyaasiyiinta Soomaalida saartay cunaqabateynta visaha dal ku galka Mareykanka, ayaa waxa jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya in asbuucaan Xasan Kheyre loo diiday visaha dal ku galka Mareykanka.
Sida MOL u xaqiijiyeen dublamaasiyiin la socda arintaan, Xasan Kheyre ayaa ay ahayd in uu asbuucii la soo dhaafay uu u safro magaaalada Miniapolis ee gobolka Mineasota. Safarka ayaa la xiriiray qorsho oo Kheyre rabay in uu halkaas isugu soo sawiro Soomaalida ku nool Mareykanka.
Waxaa wax fajac ku noqday Xasan Kheyre in loo diido visaha dal ku galka iyada oo aanba wali la meelmarin go’aankii dhawaan ka soo baxay wasaarada arimaha dibada dalka Mareykanka.
Xogta ay heshay MOL ayaa sheegaya in Xasan Kheyre uu qabsaday lobbyist ama kooxaha kaalmeeya siyaasiyiinta si ay ugu fududeeyaan in uu helo Viso. Waxa kale uu u dacwooday dowlada Norway oo uu haysto baasaboorkooda in ay ka caawiso in uu helo visaha lagu gali Mareykanka.
Lama hubo in Xasan Cali Kheyre ku guuleysan doono in uu helo Viso ama loo ogolaado si uu halkaas ugu safro.
Previous articleDeni “Hawiye ma ogola in beesha Maxamud Saleeman noqoto Madaxweyne, kii noogu danbeeyayna iyaga ceyriyay”
Next articleGalmudug oo dib u dhigtay doorashada Hal Kursi
Madaxweyne Muuse Biixi oo xaalad deg-deg ah soo rogay (Aqriso)
Lafta Gareen oo sheegay inuusan marnaba hakad galinaynin boobka doorashada